Sida loo Download BBC Radio si iPod, iPhone ama iPad
> Resource > iPod > Sida loo Download BBC Radio si iPod via Lugood
"Waa hiwaayad inay ka dhegeyso idaacada BBC. Laakiin waxaan ka heli in ay adag tahay in la dhagaysan barnaamij aan jeclaa waqtigii aawadiis mashquul jadwalka. Hadda waxaan haystaa fikrad, ciyaaro barnaamijka on iPod ku tagaan. Sidaas waxaad camal falaysaan ogaadaan sida ay u soo bixi muujinaya radio BBC in iPod "- Cathy
Qaar badan oo idinka mid ah oo ka hor weydiin karaa naftaada su'aal isku mid ah. Ha welwelin mar dambe, Waa radio xal-diiwaan fudud ee BBC. Tan iyo barnaamijyada raadiyaha qoran yihiin oo kaliya sidii cod via Radio BBC Player oo waxaa tahay ma URLs si toos ah u soo bixi oo dhan radio show sida file MP3 ah, qoraalana radio BBC ayaa laga yaabaa inuu wax badan ka xigmad iyo wax ku ool ah. Inkasta oo aad ka podcasts u gaar ah kala soo bixi kartaa qaar ka mid ah ay muujinayso radio BBC, waxaa jira ay muujinayso in ka badan in aan la heli karin. Sidaas darteed waa fikrad fiican in la helo taariikhqorihii weyn radio inay idinka caawiyaan.
Waxaan xulanay 3 qalab si aad u qortid radio BBC si fudud. Fiiri hordhaca ah ee iyaga iyo sida loo isticmaalo si ay u qoraan radio BBC.
1. radio BBC toos ah record tayo wanaagsan
2. Jadwalka si ay u qoraan iyo shaandhayso xayeysiis
3. Samee ringtones iyo playlists for loo maqli karo
Sida loo soo bixi BBC Radio si iPod la Wondershare SAR
Tallaabada 1. Ku rakib iyo abuurtaan Streaming Audio Recorder
Download iyo rakibi Streaming Audio Recorder ku on your computer. Waxaa jira laba nooc, si aad maskaxda ku hayso si ay u doortaan mid ka mid sax ah. Ka dib markii la rakibey lagu sameeyo, waxa ay ku abuurtaan si ay u helaan diyaar.
Ogsoonow in aad u baahan tahay in marka hore la sameeyo qaar ka mid ah goobaha barnaamijka si ay u qoraan oo dhan ay muujinayso radio BBC ama barnaamijyada. Tag xaq ugu sareeya barnaamijka riix Goobta s icon. Dooro Control tab uu furmo suuqa pop ilaa iyo deji waqtiga loogu talagalay si toos ah spliting si 30000 rabtay ama in ka badan.
Tallaabada 2. Start si ay u qoraan radio BBC
Guji ka Record button ee bidixda xagga kore. Markaasuu u helaan radio BBC show, ka heli mid ka mid ah aad u baahan tahay si ay u qoraan oo ciyaaro. Eeg, Streaming Audio Recorder bilaabo inuu u qoraan idaacada BBC dhakhso leh.
Tallaabada 3. Transfer radio BBC muujinaysaa in iPod, iPhone ama iPad
In ka Library , doortaan barnaamijyada BBC aad u jeclaan lahaa in aan wareejiyo Lugood. Markaas riix Add Lugood in button iyo kuwan files audio laguugu soo diri karaa Lugood si toos ah. Connect aad iPod, iPad ama iPhone la your computer iyo wareejiyo Radio BBC ayaa muujinaysa in aad iPod via Lugood.
Sida loo Download BBC Radio fudud loo muujiyaa (A Video Tutorial)
# 2. Free Sound taariikhqorihii
Free Sound taariikhqorihii waa qalab bilaash ah oo kaa caawin kara in lagu qoro audio online. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in aad doorato qalabka duubista midig. Ka dib markii in, ciyaaro aad jeceshahay audio online oo qori audio ah in aad damisid. Waxa ay noqon doontaa qiimihiisu aad day.
Ku rakib Free Sound taariikhqorihii >>
Dhiiran si fiican u yaqaan editor maqal ah halka ay sidoo kale ku qori karta cod ka dib markii qaar ka mid ah goobaha. Markaas oo keliya u baahan tahay inaad riix Start qoro button iyo muusig online in aynu shaqo barnaamijka si toos ah. Files saarka wuxuu noqon doonaa ee ah qaabab ka mid ah regelingen ama AIFF.
Is barbar dhig 3 Tools in Download BBC Radio si iPod, iPhone ama iPad
Hawlaha Main Online maqal ah / duubo radio Rikoodh audio Online Tafatirka Audio iyo duubista
Mid ka mid ah Riix si ay u gudbiyaan files audio in Lugood
1. tayada audio wanaagsan
2. qaab xasiloon oo waafaqsan
3. joogto updates
1. muuqaalada tafatir dheeraad ah
3. taageero farsamo oo aan lahayn deg dega ah
Laga soo bilaabo miiska kore, waxaan ka heli kartaa in Wondershare Streaming Audio Recorder leeyahay hawlaha dheeraad ah oo kuu ogolaanaya in aad si ay u gudbiyaan radio duubay si Lugood leh hal click. Waxaa loola jeedaa in aad si fudud u hagaagsan karaan idaacadda in aad iPod, iPhone iyo iPad. Aan hubi hordhaca ah ee faahfaahsan saddexdii qalabka hoos ku qoran iyo sidoo kale tutorial ah tallaabo-tallaabo inaad kala soo baxdo radio BBC in iPod, iPhone ama iPad.